IGNOME 41 iza nokuthuthuka kabusha, amaphaneli, izinhlelo zokusebenza nokuningi | Kusuka kuLinux
Okuhle | 22/09/2021 10:17 | Kubuyekezwe ku- 23/09/2021 00:32 | Aplicaciones
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha zentuthuko ukwethulwa kwe- inguqulo entsha yemvelo yedeskithophu I-GNOME 41 okuza nenani elikhulu lezinguquko ezibalulekile okugqame kakhulu kuzo isibonelo ukwandisa amathuba wokumisa ukusetshenziswa kwamandla.
Amandla okushintsha ngokushesha imodi yokusebenzisa amandla anikezwa ngemenyu yokuphathwa kwesimo sohlelo. Izicelo zinamandla okucela imodi ethile yokusebenzisa amandla; isibonelo, imidlalo ezwela ukusebenza ingacela imodi yokusebenza okuphezulu ukuthi yenziwe isebenze.
Enye into entsha efakiwe yile izinketho ezintsha ukumisa imodi yokonga amandla, ekuvumela ukuthi ulawule ukufiphala kwesikrini, cisha isikrini ngemuva kwesikhathi esithile sokungasebenzi komsebenzisi, bese usicisha ngokuzenzakalela lapho ibhethri liphansi.
Ngaphandle kwalokho isikhombimsebenzisi sokuphatha ukufakwa kwezinhlelo zokusebenza sakhiwe kabusha, elenza kube lula ukuzulazula nokusesha izinhlelo zokuthakazelisa. Izinhlu zohlelo lokusebenza zenzelwe njengamamephu achazayo anencazelo emfushane. Isethi entsha yemikhakha iphakanyisiwe ukuhlukanisa izinhlelo zokusebenza ngesihloko.
Futhi ikhasi elinolwazi oluningiliziwe mayelana nesicelo selakhiwe kabusha, lapho ubukhulu bezithombe-skrini bukhulisiwe futhi okuqukethwe kolwazi kohlelo lokusebenza ngalunye kukhulisiwe. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwezilungiselelo nezinhlu zezinhlelo nezinhlelo esezivele zifakelwe izibuyekezo zenziwe kabusha.
Ngakolunye uhlangothi, singakuthola lokho iphaneli entsha yokwenza imisebenzi eminingi ingeziwe kusilungiseli (I-GNOME Control Center) ukwenza ngezifiso ukuphathwa kwewindi nedeskithophu.
Ikakhulu, esigabeni seMultitasking, izinketho zinikezwa ukukhubaza ikholi yemodi yokubuka konke ngokuthepha ekhoneni elingenhla kwesokunxele kwesikrini, ushintsha usayizi wewindi ngokuhudulela emaphethelweni esikrini, ukhetha inani lamadeskithophu abonakalayo, ukubonisa amadeskithophu kubaqaphi abaxhunywe ngokungeziwe, nokushintsha phakathi kwezinhlelo zokusebenza zedeskithophu yamanje ngokucindezela iSuper + inhlanganisela Tab.
Futhi uhlelo lokusebenza olusha lwe-Connections lufakiwe ngokusetshenziswa kweklayenti kokuxhumeka kwedeskithophu ekude kusetshenziswa izivumelwano ze-VNC ne-RDP. Uhlelo lokusebenza lungena esikhundleni sokusebenza kokufinyelela okukude kwedeskithophu okwakunikezwa ngaphambili kumabhokisi.
Ukuhlelwa kwesixhumi esibonakalayo se-GNOME Music kuhlelwe kabusha, lapho kukhuliswe khona ubukhulu behluzo, amakhona ahlanganisiwe, ukungezwa kwezithombe zabaculi kungeziwe, iphaneli yokulawula ukudlala iphinde yahlelwa kabusha.
Isisekelo sekhodi yemenenja yefasitela leMutter sihlanziwe ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle nokwenza lula ukugcinwa.
Ukusebenza kwesixhumi esibonakalayo nokuphendula.
Eseshini esekwe eWayland, ijubane lokuvuselela imininingwane esikrinini lenyusiwe futhi nesikhathi sokuphendula ngokuchofoza izinkinobho nokunyakaza kwesikhombisi sifinyeziwe.
Ukuthembela okuthuthukisiwe nokubikezela kokuphathwa kokuthinta kokuthinta okuningi.
Ikhalenda labahleli manje selisekela ukungenisa imicimbi nokuvula amafayela e-ICS.
Kuphakanyiswe ithulusi lamathuluzi elisha ngolwazi mayelana nomcimbi.
Isiphequluli se-Epiphany sibuyekeze i-PDF.js yokubuka eyakhelwe ngaphakathi ye-PDF futhi sengeza i-YouTube block blocker ngokususelwa kusikripthi se-AdGuard.
Iphaneli entsha ye-Mobile Network ingeziwe ukuphatha ukuxhumana ngokusebenzisa ama-opharetha weselula.
Isibonisi sokubala sakhiwe kabusha ngokuphelele, manje sizivumelanisa nosayizi wesikrini ngokuzenzakalela kumadivayisi eselula.
Kungezwe ukusekelwa kwezigaba ohlelweni lokwazisa.
I-GDM manje inamandla okuqala amaseshini asuselwa ku-Wayland noma ngabe isikrini sokungena ngemvume sisekelwe ku-X.Org.
Izikhathi zeWayland zivunyelwe kumasistimu ane-NVIDIA GPUs.
Idiski yeGnome isebenzisa i-LUKS2 ukubethela. Kungezwe ibhokisi ukumisa umnikazi we-FS.
Ungayithola kanjani noma uyihlole inguqulo entsha yeGnome 41?
Kulabo abanentshisekelo ekuhlolweni okusheshayo kwamakhono we-GNOME 41, kwakhiwa okubukhoma okukhethekile okususelwa ku-openSUSE kanye nesithombe sokufaka esilungiselelwe njengengxenye yohlelo lwesistimu yokusebenza ye-GNOME, futhi i-GNOME 41 nayo ifakiwe ekwakhiweni kokuhlola kweFedora 35.
Ngenkathi kungxenyeni yamaphakeji wokusatshalaliswa okuhlukile, lokhu kuzobe sekufika ngamahora ambalwa ezinqolobaneni zalokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IGNOME 41 ifika ngokuthuthuka kabusha, amaphaneli, izinhlelo zokusebenza nokuningi